Izinto ezi-5 ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuSungula iwebhusayithi yakho ye-Ecommerce | Martech Zone
Ngaba ucinga ngokuqalisa iwebhusayithi ye-ecommerce? Nazi izinto ezintlanu ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuqalisa iwebhusayithi yakho ye-ecommerce:
1. Unelungelo iimveliso
Ukufumana imveliso elungileyo kuba ishishini le-ecommerce kulula ukutsho kunokuba kwenziwe. Ukucinga ukuba unciphise icandelo labaphulaphuli, ufuna ukuthengisa kulo, umbuzo olandelayo wento oza kuyithengisa uyavela. Zininzi izinto ekufuneka uzijongile xa usenza isigqibo ngemveliso. Kuya kufuneka ukuba uqiniseke ukuba imveliso okhetha ukuyithengisa ifunwa kakhulu. Qonda ukuba uzimisele ukuqhuba ishishini kunye nokwenza imali.
Ukuvavanya imveliso entsha okanye ukunikela ayisiyonto inzima kunye nokuchitha ixesha, kodwa inokubiza kakhulu. Endaweni yokuzama into entsha, fumana imveliso efunekayo kwaye ikwi-niche enokhuphiswano oluncinci. Ukwenza lo msebenzi wesikolo kunokubonakala ngathi ngumsebenzi, kodwa kuya kuhlawula izabelo kamva xa iwebhusayithi yakho ye-ecommerce ikhula.
2. Yiba nabanikezeli beempahla ezininzi kunye nee Shippers
Nje ukuba ugqibezele imveliso oza kuyithengisa, kuya kufuneka ufumane ukuba ungayifumana phi. Ngaphandle kokuba wenza imveliso yakho iipesenti ezi-100 uwedwa, ngaphandle kwababoneleli ababandakanyekayo, ungatsiba eli nyathelo. Kuye wonke umntu, nantsi into ekufuneka uyigcinile engqondweni.
Inxalenye ebalulekileyo ye ukuveliswa komhlaba kuyenziwa eAsia. Ukufumana ulwazi ukusuka kula mazwe ukuya kwenye indawo efana ne-US kuya kuthatha ixesha. Ayizukuthatha ixesha kuphela, kodwa iya kuba yingxaki njengoko ungamawaka eekhilomitha kude nabathengisi bakho. Kule meko, kuya kufuneka ufumanise ukuba abavelisi mabaye kumaxesha oxinzelelo okanye ukungaqiniseki.
Ngokufanelekileyo, kuya kufuneka ubenakho naphi na phakathi kwabavelisi abathathu ukuya kwabane kwimveliso enye. Kuya kufuneka unxibelelane nabo kwaye ubalumkise ukuba ulindele ukwanda kwintengiso okanye enye into. Nje ukuba ugqibile ngokufumana umenzi, kuya kufuneka ukhathazeke ngokuthumela imveliso yakho. Zininzi iindlela onokukhetha kuzo, kwaye kungcono wenze inkuthalo yakho ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuya nenye.
3. Lungiselela indawo yakho ye-Ecommerce yokuGuqulwa
Masingene kwicala lokuyila ngakumbi lokuqhuba ishishini le-ecommerce. Ukwenza ishishini lakho liphumelele, kuyakufuneka wenze ukuthengisa. Ukwenza ukuthengisa kungumceli mngeni omncinci xa iwebhusayithi yakho yenzelwe ngokungagungqiyo kwaye isebenza njengoko kumiselwe ngumsebenzisi.
Ukuqesha abayili kunye nabaphuhlisi abanamava abonakalisiweyo ekwenzeni iiwebhusayithi eziqhutywa ziziphumo ukuba awuzithembi ngokwakha indawo ngokwakho. Banokucebisa ngezixhobo ezinjengeengxoxo, ii-chat chat app, okanye iipop-ups ezinokunceda ukwandisa ukuthengisa. Ukongeza, qiniseka ukuba iwebhusayithi ikhululekile kwiibugs ezibalulekileyo ezinokuthintela abathengi abanokubakho xa besenza intengiselwano.
4. Gcina imali kwiNtengiso efanelekileyo.
Okwangoku, unayo iwebhusayithi yakho ye-ecommerce kwaye uyasebenza, kodwa awukenzi mali. Ukuqala ukuzisa ukungena nokuphuma kwemali, kuya kufuneka uqale utyalomali kwiindlela ezifanelekileyo zokuthengisa. Kukho iindlela ezininzi onokukhetha kuzo. Ukuba ufuna imbuyekezo ekhawulezileyo, ungaya kunye neentengiso zemidiya yoluntu, iintengiso zeinjini yokukhangela, ukuthengisa okuphembelelayo, ukubiza ngambalwa.
Uninzi lwabantu, kuya kufuneka uqale ngezi ndlela zintathu kwaye ubone ukuba yintoni ekuzisela uguquko. Ke, xa uqala ukwenza imali kwaye usesimweni sokulinga, unokufuna ukujonga kwizicwangciso zokuthengisa zexesha elide njengokusebenza kweinjini yokukhangela (seo), Ukuthengisa umxholo, intengiso, njl.
5. Misela imigaqo-nkqubo ecacileyo kwangethuba
ukuba imigaqo-nkqubo ecacileyo kubalulekile ukuqinisekisa ukuba imisebenzi ye-ecommerce yakho yemihla ngemihla isebenza ngaphandle kwengxaki. Le migaqo-nkqubo ibandakanya umgaqo-nkqubo wabucala wewebhusayithi yakho, umgaqo-nkqubo wokubuyisa, ukuthotyelwa kwe-HIPAA ukuba uyafaneleka, njl.
Kungcono ukunxibelelana nomntu oyingcali kule micimbi. Ngelixa amathuba okuba ungene engxakini kufuneka abe mancinci, uwenze zero ngokuba nemigaqo ecacileyo, ekhonkrithi eyilelwe ukukhusela wena kunye neshishini lakho.
Njengesalathiso, ungahamba ngemigaqo-nkqubo ekhoyo kwezinye zeengxilimbela eziphambili ze-ecommerce kunye nabanye abakhuphisana phambili kwi-niche yakho.
SwiftChat inokukunceda uchonge iindwendwe ezifanelekileyo ngokukhawuleza ngengxoxo ephilayo kwaye ubakhokelele ekwenzeni ukuthenga. Ingxoxo ebukhoma kwi-ecommerce ingaba ngama-400% angabizi ngaphezu kwenkxaso yefowuni, inokunyusa ukuguqulwa ama-3 ukuya kuma-5 amaxesha, ukunciphisa izinga lokulahla iinqwelo, ukwandisa ukwaneliseka kwabathengi, ukwandisa ukunyaniseka kwabathengi, kunye nokuphucula imveliso yabasebenzi bakho.
tags: ncokolaUkuguqulwa kwenqanaba lokuguqulaikratshiimigaqo-nkqubo yokugcina idathaIncoko ye-ecommerceUkuqaliswa kwe-ecommerceintengiso ye-ecommerceabathumeli becommerceabathengisi becommerceQalisauhlala ngcokolaumthetho wabucalaUmxube wemvelisoUkukhetha imvelisoababoneleli bemvelisobuyisela imigaqo-nkquboabakhweli
Jun 24, 2021 ngo-4:57 AM
Intengiso ye-ecommerce yemidiya yoluntu sisixhobo esinamandla kakhulu. Ikuvumela ukuba unxibelelane nomzi mveliso wakho, abathengi, kunye nentengiso ngokobuqu, ngendlela yoluntu. Ungasebenzisa imidiya yoluntu ukwenza unxibelelwano kunye nokunxibelelana, ukonyusa itrafikhi kwiwebhusayithi yakho, kwaye uphuhlise isiseko esikhulu sabathengi. Ukugcina ithoni eyomeleleyo kunye nobuntu benkampani yakho ngokusebenzisa imidiya yoluntu kubaluleke kakhulu kuba ukungaguquguquki yinto eya kudala ukuthembana kubaphulaphuli bakho.